Inochenesa air conditioner kudzivirira kunhuhwirira kwakashata | Bezzia
Maria vazquez | 21/06/2022 12:00 | Musha
Wabatidza here air conditioning? Hatina kupokana kuti nekupisa kwatakaita svondo rapfuura, vazhinji venyu munenge mazvitanga. Uye zvichida, mushure mekushaya basa kwemwedzi yakawanda, wakaona imwe kunhuhwirira kusingafadzi. Usanetseke, chenesa air conditioner uye dambudziko richapera.
Kuchenesa air conditioner isati yatangazve muchirimo kunobatsira kwete chete dzivisa kunhuwirira kwakashata inogona kubudisa tsvina mune ipi zvayo yenhengo dzayo. Asi, kuwedzera, ichavandudza simba rayo rekuita. Tsvaga maitiro ese ekuichenesa nesu.
yakaungana tsvina mumasefa, maexchange, mafeni kana madhirini anogona kukonzera kunhuhwirira kusingafadzi kuburitswa kana mudziyo wabatidzwa. Kuchenesa ndiyo kiyi yekugumisa izvi uye kuita kuti mweya wakadzingwa wakachena uye usina mabhakitiriya. Dzima mudziyo, tevera nhanho inotevera nhanho uye iwe uchave nayo yakanaka seiyo nyowani mukati isingasviki maminetsi makumi matatu.
1 Nhanho nhanho yekuchenesa
1.1 chenesa masefa
1.2 chenesa mvura
1.3 Chenesa kunze kwechikwata
2 Kurichenesa rinhi?
Nhanho nhanho yekuchenesa
Basa reizvi nderokusefa mhepo uye kudzivirira mabhakitiriya uye mamwe ma microorganisms kubva pakuwanda uye kukuvadza kushanda kwemidziyo. Sefa ine tsvina inoderedza kushanda zvakanaka kwemudziyo uye ndicho chikonzero chekutanga chekubuda kwemhepo kunhuwa kwakashata.
Iwo mafirita anowanikwa mukati mechikamu chekupatsanurwa, kuseri kwegrille. Pakuchenesa uchafanira kuvabvisa. Kana iri kuchenesa kwekugadzirisa, zvichave zvakakwana kushandisa vacuum cleaner kuti ubvise guruva uye mamwe mavara etsvina. Kuti uwane kucheneswa kwakanyanya kwechirimo, zvisinei, zvakanaka sukurudza nemvura inodziya woaomesa mumumvuri usati waadzosera.
Air conditioners inodzinga mvura nekuda kwe condensation inounganidza mupani yekudhonza. Kana mvura iyi ikaramba yakamira - nekuda kwekushata kwakashata mupombi - inogona kukonzera kunhuhwirira kwakashata uye kufambisa kukura kwebhakitiriya uye fungi.
Kuvhuvhuta nesimba kuburikidza nechubhu kunogona kuve mhinduro iri nyore, zvisinei haisi chinhu chinokurudzirwa kune ese maturusi. Mukuwedzera, mukuisa pakati pepakati zvinowanzonetsa kuiwana. kuishandura kuti iite kupisa kwemaminetsi mashomanana inogona kuva imwe mhinduro.
Chenesa kunze kwechikwata
Kunyangwe iyo yakanyanya kutetepa zvikamu zvakadzivirirwa mukati meyuniti, zvichave zvakare zvakakosha kuti chengetedza kunze kwemudziyo kuitira kuti irege kuunganidza guruva netsvina. Uye iwe unogona kuzviita zviri nyore chero bedzi mudziyo uri munzvimbo inosvikika.
A vacuum cleaner uye jira rakanyorova zvishoma richabatsira kuchengeta unit yakachena kunze. Iyo grille, zvimbi zvekupinza mhepo uye casing ichave yakanaka senge nyowani pasina chikonzero chekushandisa chero chakakosha chigadzirwa chekuchenesa.
Kazhinji, zvinokurudzirwa kuchenesa air conditioner isati yatanga muchirimo uye mushure mekushandisa kwenguva refu muzhizha. Kaviri pagore nguva dzose Unozonzvenga matambudziko akawanda. Uye zvakare, hazvikuvadze kuchenesa mudziyo kunze zvimwe patinoita mamwe kuchenesa.
Zvinoenda pasina kutaura kuti mhepo yakachena inotenderera nemusha wedu, matambudziko mashoma achamuka. fodya, chimuni chiutsi kana kicheni inogona kuita kuti mamiriro acho awedzere uye inoda kucheneswa nguva nenguva uye kwakadzama.
Takupa makiyi kuitira kuti ugone kuchenesa maair conditioner mumba mako asi gara uchiyeuka kuverenga bhuku rekuraira remugadziri usati watanga kuti udzivise matambudziko. Chikwata chimwe nechimwe chine zvacho.
Chekupedzisira, kana uine chero kusahadzika, tinokupa zano kuti ufonere nyanzvi kana kubata basa rekugadzirisa yekuisa. Splits michina yakapfava inoda vashandi vane hunyanzvi kuti vakwanise kugadzirisa mamwe matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Chenesa air conditioner kudzivirira kunhuwa kwakaipa